Maxaa la sameeyaa haddii biyuhu daruur yihiin | Kalluunka
Waxa la sameeyo haddii biyuhu yihiin daruuro
Encarni | | Aquarium-ka biyaha qabow, Aquarium biyo qabow, Aquarium Tropical
Waxaa laga yaabaa in maalin ayaad soo kacdaa waxaadna arkeysaa biyo yaab leh. Waqtiyadaan waxaad isweydiineysaa maxaa dhici karay oo biyuhu ay sidaas yihiin haddii aadan sameyn wax ka duwan maalintaada ama kalluunkaaga. Badanaa tani waxay ka imaan kartaa guuldaradii matoorka hawada aquarium-ka, ama inuu wasakh badan yahay, ama inuu bilaabo inuu fashilmo (oo dhici karta).
Hal sabab ama mid kale, xalka ugu horeeya ee aan ku qaadi karno xaaladdan ayaa ah madhan, maahan qolka quraaradda, laakiin laba meelood, si loogu beddelo biyaha daruurta ah biyo wanaagsan. Waxaan kugula talinayaa inaad fursad u hesho inaad nadiifiso salka adoo biyaha hoosta ka saaraya, taasi waa, inaad moodid inaad bedelid nadiifin dhaqso ah.
Tallaabada xigta waa dibadda u qaad miirayaasha iyo mashiinka si aad si fiican ugu nadiifiso. Waxay noqon kartaa in miirayaashaasi sidoo kale wasakh yihiin waana taas sababta wax waliba u noqdeen daruuro. Si kastaba ha noqotee, haddii mashiinku leeyahay algae ama alaab tuubbada gudaha markaa waxaan kuu sheegi karaa inay fiicnaan laheyd in gebi ahaanba la faaruqiyo quraaradda.
Xaqiiqda haysashada maydadka ajaanibta ah ee tuubada mashiinka ayaa naga dhigaysa inaan u maleyno inay jiri karaan algae gudaha qeybta ay ku yaalliin miirayaasha iyo mashiinka iyo in, labo ama seddex maalmood ka dib, ay dib noogu soo laaban doonaan iyagoo leh daruuro biyo ah.
Marka biyaha oo dhan la beddelo, waxaa lagugula talinayaa inaad ku darto waxyaabaha ka hortagga algae si looga hortago samaysankooda iyo waliba wax soo saar si looga saaro chlorine-ka biyaha iyo waliba in lagu abuuro bakteeriya.
Dukaamada xayawaanka lagu iibiyo waxay sidoo kale ku iibiyaan a alaabta maxaa la tuuri karaa si loo cadeeyo biyaha. Waan isku dayay mana i siinin natiijo badan laakiin adigu waad tijaabin kartaa naftaada. Waxay badanaa leeyihiin 24 saacadood si buuxda loo ordo awood u lahaanshaha ku celcelinta saacadahaas kadib waqti labaad ka hor inta aan kugula talin inaad faaruqiso quraaradda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Aquarium biyo qabow » Waxa la sameeyo haddii biyuhu yihiin daruuro
Kaarbo dahab ah
Kalluunka nadiifka ah